कति कुरा गर्न मन छ ? टेलिकमको भ्वाइस प्याक लिनुस् दिल खोलेर कुरा गर्नुस् – Karnalikhabar
काठमाडौं / आफ्ना प्रियजनसँग मोबाइलमा दिल खोलेर कुरा गर्न मन छ, तर ब्यालेन्स सकिएर दिक्दार बन्नुभएको छ ? हालको विषम परिस्थितिमा त झन् धेरै कुरा गर्न मन लाग्छ होला । यो अवस्थामा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका अनलिमिटेड डे भ्वाइस प्याक र अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक अफरहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ । यी प्याक प्रयोग गर्दा पैसा सकिने चिन्ता नलिई जति पनि कुरा गर्न सकिन्छ ।
अनलिमिटेड डे भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १५ रुपैयाँमा बिहान ५ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म जतिपनि कल गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ । यो भ्वाइस प्याक खरिद गर्नका लागि सिधै *1415*9*2# डायल गर्नु पर्दछ । यो प्याक लिनका लागि DVUNL लेखेर १४१५ मा एसएमएस गर्न पनि सकिन्छ । यो प्याक एक पटक लिए पछि २४ घण्टाभित्र उपयोग गरिसक्नु पर्छ ।
अनलिमिटेड नाइट भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म असिमित कुराकानी गर्न सकिन्छ । राती कुराकानी गर्नुपर्ने ग्राहकका लागि यो प्याक निकै उपयोगी भएको टेलिकमको भनाइ छ । यो प्याक लिनका लागि *1415*1*5*4# डायल गर्नु पर्दछ । त्यसैगरी L NVUNL लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाएर पनि यो प्याक लिन सकिन्छ । विभिन्न प्याकेज प्राप्त गर्नका लागि *1415# मा डायल गरेर आफूलाई उपयुक्त हुने प्याकेज खरिद गर्न पनि सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
अघिल्लो - कोरोना विरुद्धको जनचेतना र गतिविधिमा सहयोग गर्न मेयरले दिए प्रहरीलाई आफू चढ्ने गाडी
चितवनको कोरोना अस्पतालमा मृत्यु हुने किड्नीका बिरामी - पछिल्लो
अब नेपाल टेलिकमले रिचार्ज गरे बराबरको बोनस दिने
काठमाडौं विश्वकै छैटौँ प्रदूषित शहर
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण, के के छन् एजेण्डा ?
झलनाथ खनालकै क्षेत्रमा समाजवादी शून्य सबै कार्यकर्ता एमाले प्रवेश
मलेसिया रोजगारीका लागि पूर्वस्वीकृति
महाकालीमा स्थानीयको व्यापक विरोध हुँदापनि भारत एकतर्फीरूपमा तटबन्ध बनाउँदै
पल-समिक्षा प्रकरण : ‘न त्यो बलात्कार हो, न अपराध हो’ : डाक्टर केसी